यि हुन चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली: ८० रोपनीको जग्‍गाधनी पुर्जा हातमा ! कति पर्यो मुल्य ? (भिडियो सहित) - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»यि हुन चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली: ८० रोपनीको जग्‍गाधनी पुर्जा हातमा ! कति पर्यो मुल्य ? (भिडियो सहित)
यि हुन चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली: ८० रोपनीको जग्‍गाधनी पुर्जा हातमा ! कति पर्यो मुल्य ? (भिडियो सहित)
By रबि धिताल on ७ चैत्र २०७४, बुधबार ००:३२ भिडियो